Ummad kii Dilay u ooyaysa !! W/Q: Aadan-deeq | Dhamays Media Group
Ummad kii Dilay u ooyaysa !! W/Q: Aadan-deeq
Wakhti aad u cajab badan ayaa dadkeenii iyo dalkeenuba ku Jiraa oo aad is odhanayso Malaha waaba tii'dii la sheegi jiray. Xukumada Kulmiye intii talada Dalka aay hanatay ilaa maanta Umada cabashaa ka yeedhaysay khusaysa hab maamulka xukumada oo Musuq, Cadaalad Xumi iyo dhami haykalkii dawladnimo oo khariban.
Dhami waynu ka wada dheregsanahay oo wax inaga qarsooni ma Jiraan, waxaynu jecelnahayna in aaynu helno Xukumad u hogaansan Shuruucda iyo Dastuurka Dalka u yaala oo Umadu hesho Cadaalad iyo sinaansho.
Hadaba iyadoo aay sidaas tahay ayaa Markii doorashadii soo dhawaatay ee aay inagu soo fool yeelatay ayaa Waxaa dhacday in umadii mar qudha is bedesho oo Xisbul Xaakimkii Kulmiye ee Dilaayay inay u Ooyaan. Arintani yaab iyo Fajac ayay igu noqotay! Umadii ayaan aad u eegay iyo bal inaan doono sababtii iyo wixii dhaliyay in mar qudha umadii ka cabanaysay Xisbiga Talada haya ee Kulmiye Hadana waxa Keenay inay u Riyaaqaan.
Dhex qaaday Bulshadii aadna u warsaday. Waxaa isoo baxday in la igu yidhaa Xukumada iyo Xisbiga Kulmiye Waa kala laba oo Musharaxa Xisbiga Kulmiye marka uu Talada Qabto Dalka iyo shuruucdiisaba isagaa sugi doona oo musharaxu waa mid War Cad oo jecel wixii sharciya.
Anigii ayaa naftayda la shooray oo is waydiiyay horta ma Xisbi ayaa Umadu Dooratay mise Shaqsi? Waxaan gartay in Umadu daacad tahay oo hadba filin cusub loo dhigo oo loo sawiro khiyaali Iyaguna waxba aanay diidinba. Hadana siyaasiyiintii ayaan eegay mise waa kuwii xukumada ahaa ee Wasiirada ahaa oo maalinka xilka laga qaado wada mucaarid noqonaya oo xisbiga Wadani isku shubaaya oo aad inta loogu soo baxo Xafladana loo agaasimayoo dadkuna aad ugu sacabinayaan.
Hada waa Wasiiradii la lahaa hantidii qaranka ayay ku tagri faleen ee umaduu sheegaysay oo aay dhacday in musharaxa Kulmiye xataa Borama kaga qudbadeeyay in ninkii xukumada ugu tunka waynaa ee umada dhan walba u jiidhay maanta dhaliilaayo xukumaduu ka tirsanaa.
Horta dalkeena Somaliland inta Umadu noocan aay noqotay waa mudadii Kulmiye Talada dalka hayay, intii ka horaysay umadu sidan way dhaantay oo iyaguba waa ogyihiin kana war qabaan in is bedelwayni ku dhacay lakiin hada sidan aay yihiin lahaystaan.
Waxaa kaaga daran marka bulshadu doodayso sida tabashooyin kooda iyo dawladnimada sida aay uga warhayaan waxa qaldan oo dhan una rabaan nidaam dawliya oo saxan iyagoo hadana baadilka usii sacabinaaya eed uga dheehan Karto ololaha Xisbiga Kulmiye iyo Wadani.
Miyaanay iska noqonayn kii dilaayay ayay u ilmaynaysaa.
Aadan Cabdi Daahir (Aadan-deeq)
Previous: Wareegto: W. Waxbarashada Oo Dhaqan-geliyey Go’aan Culus
Next: Hargeysa Oo Laga Furay Kiniisad Dawladdu Ogolaatay